Ny fanabeazana sy ny foto-kevitra venezoelana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2018 5:44 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, русский, Italiano, বাংলা, Español
Sekoly momba ny fitantanana, ny Teny Maoderina sy ny Fampianarana ao amin'ny Oniversite Afovoany ao Venezoela. Sary avy amin'ny Warairarepano&Guaicaipuro. Nozaraina araka ny lisansa Creative Commons. Attribution-Share Alike 4.0 International.
Herinandro maro lasa izay, nifoha aho ary nahita vaovao momba ny fanambaran'ny filoha Nicolás Maduro fa “hanery ny fanesorana” ireo taranja momba ny maha-olombelona eny amin'ny oniversite izy. “Ny oniversite rehetra dia tsy maintsy mifandray amin'ny “Drafitra Tanindrazana” (na Plan de la Patria) 2025, izay mitovy amin'ny voalaza fa hiankina amin'ny foto-kevitra manokana izy ireo.
“Tsy afaka hanana matihaninana an'arivony nahazo diplaoma tamin'ny taranja oniversite izay tsy misy ifandraisany amin'ny fampandrosoana ny firenena isika,” hoy i Maduro. Izay lazaina fa tsy manampy mihitsy amin'ny fampandrosoana ny firenena ny taranja tahaka ny zavakanto, ny teny maoderina sy ny fianarana iraisampirenena (fantatra ihany koa hoe fianarana diplaomasia).
Nangovitra aho raha namaky ny vaovao. Tsy amin'ny maha nahazo diplaoma ahy tamin'izany taranja izany ihany, fa koa noho ny fiantraikan'izany mivantana—amin'ny fotoana fohy na antonony—manoloana ny hevitra mitsikera sy ny manam-pahaizana holistika momba ny fampianarana ny taranaka Venezoelana ho avy.
Na dia tsy mahagaga ahy aza ity vaovao ity. Indrindra hatramin'ny fanomezan-danja haingana ny “revolisiona” nitranga nandritra ny telo taona, sy ny fihetsiketsehana tamin'ny taona lasa. Fa gaga tamin'ny fahazavana, ny fahaiza-miteny sy ny tsy fahafahana manakana ny fikasan'ny fitondrana hametraka rafi-panabeazana mifanaraka amin'ny fotokeviny.
Tsy vao sambany izao, ary tsy ity ihany no oniversite voakasika
“Tsy azo ihodivirana ny hitrangan'ny zavatra toy izany”, hoy i P, sosiôlôgy. Nandritra ny telo taona, mpanara-maso mpitsikera ny fanovana ny fandaharam-pianarana napetraky ny fitondrana i P. “Ho an'ny governemanta, manda fiarovan'ny fifaharana tsy voafehin'izy ireo ny oniversite, na dia eo aza ny ezaka nataony.”
Tsy sambany no nitrangan'ny zavatra tahaka ity, taona vitsy lasa izay, niadian-kevitra tao amin'ny media sosialy ny “Colección Bicentenaria“, andiana boky fianarana noho ny fanodikodinana tantara miharihary tao aminy. Tsy vitan'ny namolavola tantara nasiana endrika vaovao sy nahitsy araka izay mahamety azy ny governemanta, fa nanangana fomba fitantara vaovao izay natambatry ny ideôlôjia ny fanehoan-kevitra rahatrizay.
Nihaonga tamin'i P tao amin'ny biraony ao amin'ny oniversite tsy miankina iray mbola ampianariny aho. Nijery ahy tamin'alahelo izy ary naka ny iray amin'ireo boky tsara rafitra teo amin'ny fitoeram-bokiny mikorontana. Dika iray tamin'ny Colección Bicentenaria malaza izany. Nanokatra izany kisendrasendra izy ary nanolotra izany tamiko: Chàvez, mitondra samboadin'ny filoham-pirenena, mihazona tovovavy eo amin'ny sandriny izay mamaky boky tsara eo ambanin'ny hazo
Mametraka amim-pitandremana ny tontolon'ny foto-keviny ny governemanta, hoy i P, mampiseho ahy ny sarin'ny sekolim-panjakana ao Caracas izay ahitana vondron'ankizy maka sary eo anoloan'ny sarin'i Chàvez. Mijery ny fakàn-tsary miaraka amin'ny tsiky mampiseho nify ireo ankizy, enin-taona no zokiny indrindra, manao fiarahabana miaramila avokoa izy rehetra.
Mieritreritra momba ny hevitra tanindrazana izay matetika ampiasain'ny governemanta aho. Ny hevitra firenena izay toa tsy ahitana ihany ny tantarany sy ny mponina ao aminy, fa koa ny foto-keviny. Ny tanindrazana izay mamaritra karazana firenena vaovao, mifanaraka amin'ny foto-kevitra, miaraka amin'ny fitiavan-tanindrazana tafahoatra (jingoisma) mora vidy ary maninona koa raha feno zavatra mifandraika amin'ny fampiasana ara-miaramila.
Hanaiky tsikelikely ny Venezoeliana vaovao fa tsy “antoko politika fotsiny” ny Chavismo, fa ampahany tena ilaina amin'ny mari-panondroana Venezoelana.
Roa taona lasa izay, nisy ny tantara ratsy hafa tao amin'ny fampahalalam-baovao momba ny fanovana nataon'ny Minisiteran'ny Fahefam-bahoaka ho an'ny Fanabeazana tamin'ny fandaharam-pampianarana any an-tsekoly. Araka ny antontan-taratasin'ny governemanta izay nivezivezy tany an-tsekoly, “be fanatsorana, fanakelezana sy mekanika” ny fomba fampianarana nampiasain'ny ivom-pampianarana.
Tsy ahitana taranja ny tolo-kevitra fandaharam-pianarana vaovao, fa lohahevitra fampianarana. Milaza ihany koa izy fa ireo lohahevitra ireo dia tokony “hamaritra ireo tanjona ara-tantara dimy amin'ny Drafitra Tanindrazana ao anatin'ny rafitra mifampiankina”.
Nanazava tamiko i P. fa ireo fanovàna ireo dia tsy misy ifandraisany amin'ny famolavolana rafi-pampianarana maoderina, fa amin'ny zavatra hafa fanahy iniana kokoa, izay mitondra vesatra ara-politika maharikoriko. Ny tolo-kevitra momba ny fanavaozana ara-panabeazana dia maniry ny hifandray amin'ny “tanjona ara-tantaran'ny” “Drafitra Tanindrazana” nosoratan'i Hugo Chávez. Nanomboka tamin'ny taona 2007 tamin'ny fampahafantarana ny “Fandaharam-pianarana Nasionaly Bolivariana” izay tafiditra anatin'ny fitsapa-kevi-bahoaka momba ny lalàm-panorenana izany dingana izany.
Resy tamin'ny fifidianana ny drafitra saingy mbola napetraka miandalana tamin'ny alalan'ny didy hitsivolana, tsy ahitana karazana marimaritra iraisana.
Amin'izany rehetra izany ao an-tsaina, azoko an-tsaina ny taranaka izay hitombo ao Venezoela mandritra ny folo taona manaraka. Taranaka tanora resy lahatra fa tokony ho velom-pankasitrahana noho ireo famoaham-bokikely avy amin'ny governemanta izy ireo. Hanana foto-kevitra ho toy ny antony fototra sy maotera mitondra ny fiainany izy ireo. Taranaka iray hihevitra fa mifanohitra amin'ny firenena ny feo manivaka. Firenena voasasa atidoha, tsy mila tohan-kevitra na adihevitra. Firenena mangina.
Mieritreritra izany firenena izany aho ary mahatsapa tahotra. Rehefa mandeha eny an-dàlambe maloto sy feno korontana ao Caracas aho, dia mijery ny manodidina ary tohina indray amin'ny endrik'i Chávez mijery ahy avy eny rehetra eny. Matoatoa tazana foana eny amin'ny takelaka efa mavomavo sy afisy efa rovitra. Eny rehetra eny foana ny politika, toy ny endriky ny tahotra, toy ny sarin'ny savorovoro.